Iiprojekthi zentengiso kuthelekiswa neenkqubo | Martech Zone
Iiprojekthi zentengiso kuthelekiswa neenkqubo
NgoLwesihlanu, Matshi 2, 2012 Douglas Karr
Uninzi lwabathengi bethu lufuna imfundo encinci xa singena kubo. Bakuqhelile ukusebenza nabathengisi babo bokuthengisa ngokungathi bathenga ukutya. Bafuna ukwenza into, ixabiso kunye nokuphuma. Senze intengiso iiprojekthi Kwixesha elidlulileyo kwaye sinentloni kubo ngoku. Ngaphandle kokuba sinokubiza ixabiso leprojekthi yokufumana amaxesha amaninzi, sihamba kude nesivumelwano. Endaweni yokuba sisebenze nabaxumi bethu rhoqo ukwenza iinkqubo zokuthengisa.
Ingxaki kukuba ukumiliselwa kwentengiso kwahluke kakhulu. Awuyithengi iserver, uyila isicwangciso esisekwe kwizixhobo nakwiziphumo. Ukuthengisa yi lungele, umlilo, jolisa qhinga. Ukuze ufumane ukuqonda ngempembelelo yeprojekthi yentengiso, kuya kufuneka wenze kwaye uqale ukubona iziphumo. Andikhathalelanga oko kukuyilwa ngokutsha kwesiza, inkqubo yentengiso ye-imeyile, okanye yinto nje uyilo lwe infographic.
Njengomzekelo, xa siyila i-infographics, sicebisa uyilo olunoyilo lokwenyani ukubonisa umthengi umsebenzi wobugcisa kunye nolwakhiwo. Ukuba bayayithanda, emva koko sihamba ngeendlela ezininzi kunye nomxholo ukuqinisekisa ukuba sixelela umyalezo olungileyo. Kuphela kuxa samkelwe ngokupheleleyo kwaye iinyani zethu ziqinisekisiwe kwaye zibhaliwe apho sikhupha khona infographic. Asikugxeki kuwo onke amawebhusayithi… siya kuphehlelela apha ekhaya, siqinisekise ukuba sinendlela yokulinganisa ifuthe, ukubukela iziphumo, emva koko siqale ngokuzazisa. Ilungile, umlilo, jolisa.
Xa sisebenza kunye nomthengi kwinzinjini yokukhangela yabo, siza kuthi ze bacele ukuba basayine ikhontrakthi yamagama athile aphambili. Sisebenzisa iqonga kunye nomxholo (Lungile), emva koko senze iqhinga ngokwazisa isiza (umlilo), kwaye emva koko siqwalasele indlela isiza esalathiswe ngayo kwaye ngawaphi amagama aphambili aguqula okona kulungileyo…wayethanda).
Siyayithanda imihla ekujoliswe kuyo, kodwa ibabone besiza kwaye behamba phantse nomthengi ngamnye. Uninzi lwabathengi bayaqonda ukuba utshintsho olongezelelekileyo kunye nohlengahlengiso luya kwenzeka ukuze umhla ekujoliswe kuwo ungabi ngumgca wokugqibela, sisantya esiphezulu. Abanye abathengi, nangona kunjalo, bathanda ukuwucofa umhla ... ngelixa bengekho ngexesha ngezixhobo okanye bacela utshintsho olongezelelekileyo… OKANYE utshintsho lwentengiso kunye nephulo lifuna ukuba lihlengahlengiswe. Ukanti abanye abathengi bayanikezela ku "ol" Masibethwe ngumoya ngaphandle komthengisi ukuzama ukufunxa imali eninzi kobu budlelwane "… sifunde ukugxotha abo bathengi.
Isitshixo ekuphuhliseni ngempumelelo inkqubo elungileyo yentengiso kukuba u-agile kwaye uhambe ngokukhawuleza. Ilungile, umlilo, jolisa. Ilungile, umlilo, jolisa. Ilungile, umlilo, jolisa. Qaphela ukuba onke amaqhekeza ahamba kwaye ifuna ibhalansi ethe-ethe ukuze ufumane isicwangciso sentengiso esiphumelelayo. Ukuba uphuhlisa isicwangciso ukusuka ngaphambili ukuya ngasemva, tyala lonke ixesha lakho nemali kuyo, ngaphandle kokukwazi ukulungelelanisa imveliso xa izinto zingalunganga ngqo.
Ukwenza iprofayili ye-B2B kunye nokuCingela ngeMintigo
Rant: Intengiso ye-Piracy ekwi-Intanethi